Usuku losuku Celebrate Crafts Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Usuku losuku Ukubhiyozela imisebenzi
Ikhefu lehlobo lasekhaya
Ithegi yasehlobo i-accessory ye-summer day train! I-summer day train iyisithethe esivela kwiPalatinate kwaye iquka ezinye iindawo ezikufutshane. Ngaloo busika obonwabileyo ebusika iyaxoshwa, ngaphambili wayenesiko lokufa.
Isithethe sosuku lwehlobo
Usuku lwehlobo lwasehlobo lufuzisela ubomi obutsha, entwasahlobo kwaye ngoko ke ukuqala komjikelezo omtsha. Ngokuxhomekeke kuluntu, isitimela sehlobo sasehlobo senzeke ngaphambi kwePasika, ngokwenko ngeSonto lesithathu ngaphambi kwePasika.
I-Tinker ihlobo lehlobo lehlobo liyazibamba
Ngokuqinisekileyo, isiko esithandwayo saseKurpfälzer mhlawumbi sineengcambu zobuhedeni kwaye unokufumana ubungqina kuyo nangemihla yoLumkani weLanga, uLouis XIV. Ayaziwa ukuba iindawo zasehlotyeni zasehlotyeni zasele zikhona ngelo xesha. Emva kwehlobo lohlobo lwehlobo, ubusika butshiswa ngesimo somntu omkhulu onqabileyo kwiqhwa.
Iyintoni imini yohlobo?
Intsuku yomhla wehlobo luyintonga elula, ebizwa ngokuba yiStecken, elinezixhobo ezinemibala. Kuphezulu uhlala umvubelo we-pretzel ngamanye amaxesha kunye neqanda eliphuphayo njengophawu lobomi obutsha kunye nentwasahlobo-apha ubona ulwalamano nePasika!
Kwezinye iidolophu, ii-apula okanye iziqhamo ezincinane ziyinkokhelo ngosuku lwehlobo. Ngeempawu zemibala ehlotywe ezandleni zabo, abantwana bahamba kunye neenqwelo ezinqabileyo zeeklabhu ezahlukeneyo. Ekugqibeleni, eqinisweni, i-pretzel enokudliwayo inokudliwa - okona mncinane kunene, ibalaseleyo!
Kwaye kuza isikhokelo esilula malunga nendlela yokwenza loo hlobo ehlobo ehlobo ehlobo. Oku kuphakamisa umoya xa ikhephu kwi-meadow ingafuni ukunikela kwaye abantwana sele bephupha imibala yasentwasahlobo.
Okokuqala, ufuna izinto ezilandelayo: intambo ye-hazelnut okanye intambo (efumaneka nakwiivenkile zeentyatyambo), umkhonto we-pocket, iqanda eliqothukileyo, imbiliso ye-leaven pretzel (iyakubhakwa!), iindonga okanye iphepha le-crepe.
Okokuqala, ulola intonga yabantwana, ngoko uqala ukuzalisa izithixo ukusuka phezulu ukuya phezulu kunye neengcongolo ezigqityiweyo (ezithengwa okanye ezenziwe ngaphambili). Ukuba ukhetha ukusebenzisa iphepha le-crepe, unokuyihobisa iindidi zentsuku zasehlobo. Oku kulula ngakumbi kubantwana abancinci. Mane ufake iibhanki zamaphepha omda omude ngaphezulu, uphononise kancane uze ufake imvubelo ye-pretzel kunye neqanda phezulu - usuku lwehlobo lukulungele.
Ukuba ufuna, ungayifaka intonga ngokwawo ngephepha lokupasa, akukho mingcele engqondweni yakho!
Nicholas | Ukubhiyozela imikhosi
St. Martin - Saint Martin | Ukubhiyozela imikhosi
Iinqwelo ezinkulu zekwindla nobusika
Yenza i-owl ilanga Saint Martin
Tinker nabantwana - izinto zendalo
Tinker nabantwana - ityuwa inhlama
Tinker nabantwana - UMthi woBomi
Tinker nabantwana - DIY
Tinker nabantwana - uphawu lwesango
DIY kunye nabantwana - DIY